Ọ bụ oge na-gị iTunes ka esonụ larịị site na iji mmezi nkwụnye ins. Isiokwu a ga-ekpuchi 5 bara uru iTunes plugins maka lyrics, anya, Eq, faịlụ Nyefee na nhicha gị song tracks.
Get a oké Companion maka iTunes na ya nwere ike ịchọ ọmụma maka gị niile songs dị ka album, ọgụ, album artwork, lyrics na ndị ọzọ. Rịba ama na ọmụma nwekwara ike agbakwunyere ka music faịlụ otú i nwere ike na-na ọ laa. Mụtakwuo >>
iTunes Lyrics ngwa mgbakwunye - iTunes Companion
Nke a bụ ike kacha ike lyrics mgbakwunye maka iTunes anyị ahụwo na-anwale. Lyrics mma bụ enweteghi atụmatụ si iTunes niile version. Na nke a iTunes lyric nkwụnye, ị nwere ike mfe na-ekiri ndị lyrics maka ugbu a na-akpọ music ma ọ bụrụ na adị. Ma, i kwesịrị ịchọ ndabara nchekwa data maka lyrics, ma ọ bụ ịhụ na ọ na Google. Ozugbo lyrics bụ fetched, iTunes Companion nwere ike na-azọpụta ya na song faịlụ. Ọzọkwa, ị pụrụ ime ka Karaoke-ịke lyrics na ala.
Rịba ama na ị chọrọ nwụnye Yahoo Wijetị ngwa (n'elu ikpo okwu) n'ihu na-eji nke a iTunes Lyrics nkwụnye na.
iTunes Visualizer ngwa mgbakwunye - Cover Version
Cover Version bụ iTunes visualizer nkwụnye na na ọ bụghị naanị na-egosiputa album cover artwork nke ndị a songs ugbu a na-akpọ, ma na-egosikwa lyric ma ọ bụrụ na e nwere. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-adịghị amasị iTunes Lyrics ngwa mgbakwunye ẹkenam n'elu, ị ga-enwe mmasị iji nke a Visualizer-Lyric plugin.
Dị ka a visualizer plugin, Cover Version plugin enye dị iche iche na-akpata: album cover artworks ga-ngosi dị ka n'usoro n'usoro ikiri, kaleidoscope, flapping ọkọlọtọ, na vertigo mmetụta, ma ọ bụ dị ka a eji ebi ndụ. Ị nwere nakwa ọtụtụ nhọrọ iji hazie ihe anya mmetụta. Cover Version bụ ma dị maka Windows na Mac. Ị nwere ike ibudata ya ebe a na-ele ihe ọmụma zuru ezu banyere nke a iTunes visualizer plugin.
iTunes nhazi ụda ngwa mgbakwunye - Audio ikwusi n'ike Pro
Ọ bụrụ na ị dị oké njọ music enthusiast, ị pụrụ ịhụ ndabara equalizer nke iTunes bụ kwa mfe. Ebe a bụ ebe Audio ikwusi n'ike Pro abịa. Ọ bụ ihe kasị ọkachamara equalizer plugin - nke a bụ ihe anyị na-akpọ ya - otu ha homepage, Audio ikwusi n'ike Pro bụ idekọ ọ bụla ọdịyo na Mac, na 50 wuru na-plugins ịgbanwe audio tupu ndekọ. Ọ bụghị a free iTunes plugin. Ọ ga-eri gị $ 32. Ma anyị na-eche na price bụ ihe ezi uche dị otú ahụ a elu àgwà iTunes plugin.
MobileGo maka iOS - File Nyefee ngwa mgbakwunye
Anyị ị furu efu gị iTunes Ọbá akwụkwọ, MobileGo maka iOS (Windows) ma ọ bụ MobileGo maka iOS (Mac)-abịa dị ka a ndụ nchekwa. Ọ rebuilds gị iTunes n'ọbá akwụkwọ site na-adọkpụpụta iOS ngwaọrụ ọdịnaya ka iTunes. E wezụga, ị pụrụ iji ngwá ọrụ a ndabere video / music / foto / kọntaktị / SMS si iOS ngwaọrụ kọmputa, nakwa dị ka ọ bụla DVD ma ọ bụ video, music, photos na ndị ọzọ site na kọmputa gị obere ngwaọrụ na-enwe na ọ laa. N'ezie, ọ ga-eji dị ka ihe iPod / iPad / iPhone Njikwa faili na-enweghị iTunes.
TuneUp - The # 1 Ikwunye-na maka iTunes?
Nke mbụ niile, ihe nwere ike TuneUp-emere gị? N'okpuru ebe bụ isi atụmatụ nke TuneUp:
1. akpaghị aka ozi kpọtara song Ama
2. Hichapụ oyiri song tracks
3. Fixe efu cover nkà nke album.
4. Alụta music videos, egwu alerts, artist BIOS na ndị ọzọ
N'ihi ya, ọ bụ # 1 nkwụnye na gị? Ọ bụrụ na ị nwere nnukwu music collection, n'ezie, ọ na-azọpụta gị oge na idochi gị. Na-agbalị free ma nweta akwụkwọ ikike site $39.95.